Mozika klasika :: Hatomboka eny tanànan’ny mompera Père Pedro ny « Nosy-Be Symphonie » • AoRaha
Mozika klasika Hatomboka eny tanànan’ny mompera Père Pedro ny « Nosy-Be Symphonie »
Hetsika fanao isan-taona ho an’ny mozika klasika. Miditra amin’ny andiany fahenina ny « Nosy-Be Symphonie », izay hotanterahana amin’ny 30 aogositra 2019 ka hatramin’ny 7 septambra 2019.
Hamaky lay ny lanonana hatrany ny eto Antananarivo amin’ity taona ity. Hiendrika fampisehoana indroa miantoana ny fety. Hampiantrano ny andiany voalohany ny ivon-toerana Akamasoa, eny Andralanitra, amin’ny zoma 30 aogositra. Hatao etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) Analakely kosa ny andiany faharoa, ny ampitson’io.
Trano fandraisam-bahiny dimy indray no handray ny fampisehoana, any Nosy-Be, amin’ny 3-7 septambra 2019. Mampiavaka hatrany ny « Nosy Be Symphonie » ny seho famaranana hatao eny amin’ny tendron’i Passot, na ilay toerana avo indrindra any amin’ity nosy ity. Seho hafa kely no ho hita satria ao anatin’ny fihainoana sy ny fankafizana ny mozika klasika no hijerena sy hankamamiana ihany koa ny masoandro mody.
Mpanakanto malagasy sy vahiny maro no hiaka-tsekatra amin’ny « Nosy-Be Symphonie ». Anisan’izany i Elzbieta Dedek, mpitendry vata maroafitsoka avy any Belzika, sady reny mpiahy ny hetsika. Hisahana ny lafiny fihirana ao ry Andry Robson, Henintsoa Rabarijaona, Kiady Rakotomalala, Ravo Raboanarisoa, Fiderana Atolotro, Benja Andriambololona, Hervais Rabarison ary Samuthia Andrianarivelo.
Tsy ho adinoina ireo mpitendry mikirakira ny zavamaneno tsofina ahitana an-dry Seta, By, Kanty ary Tohy Ramaroson. Hanatevina azy ireo kosa ny gitaran’i Harry Rakotomampionona sy ny feomangan’ireo mpihira ao Nosy-Be.
Tontolon’ny fanontana boky Misy tsy firindrana eo amin’ny mpanoratra sy ny trano mpamokatra
Sombintantara an-tsehatra Navadiky ny « Bee z’art » ho teatra ny « Antaranoana »
Fampiroboroboana ny kolontsaina :: Fampirantiana no hanombohana ny fiaraha-miasan’ny minisitera sy ny La City
Vazom-pitiavana :: Hamintina ireo taona maro nodiaviny i Njakatiana